होसियार ! नगर्नुहोस् कहिलै यस्ता गल्ती, मृगौला खत्तम हुनसक्छ
होसियार ! नगर्नुहोस् कहिलै यस्ता गल्ती, मृगौला खत्तम हुनसक्छ मृगौलालाई स्वस्थ राख्न भूलेर पनि यस्ता गल्ती कहिलै नगर्नुहोस्।
काठमाडौं– मृगौला शरिरको एक महत्वपूर्ण अंग हो। यसले शरिरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र दन उत्पागर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरिरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्दछ। त्यसैले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न भूलेर पनि यस्ता गल्ती कहिलै नगर्नुहोस्।
पिसाव रोक्ने– यदि पिसाव आउँदा पनि पछि जाउँला भनेर बस्ने बानी छ भने, आजै देखि बानी सुधार्नुस्। पिसाव रोक्ने बानीले मृगौलामा पत्थरी हुने र मृगौला फेल हुने खतरा समेत हुन्छ।
पानी कम पिउने– यदि तपाईँ नियमित पानी पिउने गर्नु हुन्न भने, यसको सबै भन्दा पहिलो र खराव प्रभाव मृगौलामा पर्न जान्छ। पानीको अभावले गर्दा मृगौलाले रगत सफा गरेर फोहोर फ्याँक्न कठिन हुन्छ। यसले उल्टो परिणाम दिन्छ भने, शरिरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ।
बढी नून खाने बानी– खानामा चर्को नून खाने बानी छ भने, यसले रक्त चाप बढाउँछ। यसले मृगौलामा दवाव पैदा गर्दछ। त्यसैले तपाइले दिनमा ५ ग्राम भन्दा बढी नून खानु हानिकारक हुन्छ।
पोषणको अभाव– शरिरमा पोषक तत्वको अभाव भो भने, मृगौला खराव हुन्छ। भिटामिन र म्याग्नेशियम भरपुर खानाले मृगौलामा पत्थरी हुन दिँदैन् भने, जाँड रक्सीको अत्याधिक सेवनले पनि मृगौला फेल हुने अत्याधिक सम्भावना हुन्छ।
मासु बढी खाने– मासुको पारखी हुनुहुन्छ र बढी नै मासु खाने बानी छ भने पनि तपाईँको मृगौला समस्यामा छ। मांसाहारले शरिरको पाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्छ जसले मृगौलामा सोझै असर गर्छ।
अनिद्रा– रातिमा निद्रा नलाग्ने वा धेरै जागा बस्ने बानी पनि मृगौलाका लागि घातक छ। यसले मृगौला सम्बन्धि विभिन्न रोग ल्याउन सक्छ। निद्राले मृगौलालाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ।
गुलियो खाने बानी– यदि गुलिया खानेकुरा धेरै बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस्। गुलियो बढी खाँदा यसले शरिरमा प्रोटीनको मात्रा बढी भएर मृगौलामा समस्या हुन्छ।
चिया कफी बढी सेवन– चिया कफी अत्याधिक मात्रामा पिउँदा पनि मृगौलामा समस्या हुन्छ। चिया कफीले शरिरमा क्याफिनको मात्रा बढाउँछ, जसले मृगौलालाई भार गर्दछ।
पेनकिलर सेवन– टाउको दुख्ने वित्तिकै वा सामान्य दुखाइ कम गर्न पनि गोली खाने बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस्। धेरै पेनकिलरको सेवनले तपाईको मृगौलालाई प्रभाव पार्दछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६ १४:०८